BWFM – CTUM
Published by ctum at May 22, 2020
၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ (၂၂) ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေး နှင့် သစ်လုပ်ငန်း အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (BWFM) အဖွဲ့ဝင် အခြေခံသမဂ္ဂများဖြစ်ကြသော Lon Shin ဆောက်လုပ်ရေး သမဂ္ဂဥက္ကဌ ဦးကျော်မျိုးနိုင် ၊ JCB စက္ကူ ပုံးစက်ရုံသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုး ဦးဂျူတီအောင် တို့ကို ILO ၏ […]
Published by ctum at May 18, 2020
BWI International Women Committee held it first virtual meeting on 18th of May 2020. Global Pandemic cannot stop women to fight for equal and safe world. […]
Published by ctum at March 1, 2020
ပဲခူးဆိုင်းဒေသကြီး ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် သစ်လုပ်ငန်း တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ အကြို လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
ပဲခူးဆိုင်းဒေသကြီး ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် သစ်လုပ်ငန်း တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ အကြို လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁) ရက်နေ့။ မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် သစ်လုပ်ငန်း အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (BWFM) ၏ အဖွဲ့ဝင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်နှင့် ဖတိုမြို့ရှိ […]
Published by ctum at December 3, 2019
လုပျငနျးခှငျဘေးအန်တာရာယျကငျးရှငျးရေးနှငျ့ ကနျြးမာရေး၊ အလုပျအကိုငျကြှမျးကငျြမှု ဖှံ့ဖွိုးတိုးတတျရေးဆိုငျရာ နားလညျမှု စာခြှနျလှာ လကျမှတျရေးထိုးခွငျး
လုပျငနျးခှငျဘေးအန်တာရာယျကငျးရှငျးရေးနှငျ့ ကနျြးမာရေး၊ အလုပျအကိုငျကြှမျးကငျြမှု ဖှံ့ဖွိုးတိုးတတျရေးဆိုငျရာ နားလညျမှု စာခြှနျလှာ လကျမှတျရေးထိုးခွငျး အခမျးအနား ( ၂၀၁၉ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ၊ (၃)ရကျ၊ လှိုငျမွို့နယျ LOTTE Hotel) အခမျးအနားတှငျ မွနျမာနိုငျငံဆောကျလုပျရေးဆိုငျရာ လုပျငနျးရှငျမြားအသငျးခြုပျ(MCEF) ၊မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ အလုပျသမားသမဂ်ဂမြား အဖှဲ့ခြုပျ (CTUM) နှငျ့မွနျမာနိုငျငံဆောကျလုပျရေးနှငျ့ သဈလုပျငနျးအလုပျသမားသမဂ်ဂမြား အဖှဲ့ခြုပျ (BWFM) […]